Madaxweynaha Puntland oo kulamo xiriir ah ka wada Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Puntland oo kulamo xiriir ah ka wada Muqdisho
Madaxweynaha Puntland oo kulamo xiriir ah ka wada Muqdisho
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay Siyaasiyiin, Xildhibaano, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kulamadan oo ahaa kuwo xiriir ahaa ayuu Madaxweyne Saciid Deni warbixino iyo tallooyin kaga dhageysanayay dadkii uu la kulmayay.
Xildhibaannada uu la kulmay Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa kamid ah Xildhibaan Cabadirashid Maxamed Xidig oo ka mid ahaa Golihii is bedel doonka Jubbaland, iyaga oo ka wada hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha doorashooyinka.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa hoyga uu ka degan yahay Muqdisho ku qaabilay Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Aqalka Sare Mowliid Xuseen Guhaad, Ra’iisalwasaare ku-xigeenkii hore xildhibaan Cabdiwahaab Ugaas Xuseen, Wasiiru dowlaha Boostada iyo Isgaarsiinta Xildhibaan Cabdullaahi Bile Nuur iyo marti sharaf kale.
Dhamaan Madaxda uu la kulmay Madaxweynaha Puntland ayaa kulamdooda waxaa ay ahaayeen is xog-wareysi xaalada dalka iyo Ariimaha la xiriira doorashada la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa tan iyo markii uu imid Muqdisho Talaadadii todobaadkii hore waxaa uu waday kulamo kala duwan, isaga oo la kulmay Madax fara badan oo ka mid ah saamileyda siyaasadeed ee dalka.